RW Rooble qeyb ma ka noqon doonaa shirqoolka madax goboleedyada ay wadaan? - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon RW Rooble qeyb ma ka noqon doonaa shirqoolka madax goboleedyada ay wadaan?
RW Rooble qeyb ma ka noqon doonaa shirqoolka madax goboleedyada ay wadaan?
Shirka Muqdisho ee Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo madax maamul goboleedyada, waxaa Rooble ku hortaalla su’aal weyn oo ah; ma xakameyn doonaa damaca siyaasadeed ee madax goboleedyada mise qeyb ayuu ka noqon doonaa?